Madaxweyne Farmaajo oo booqashadii u Horeysay ku tagaya mid ka mid ah dalalka jaarka – Xeernews24
Madaxweyne Farmaajo oo booqashadii u Horeysay ku tagaya mid ka mid ah dalalka jaarka
March 5 (XeerNews24)
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in dhamaadka bishan uu booqasho ku tago dalka Kenya, taasoo noqon doonta booqashadii ugu Horeysay ee uu ku tago mid ka mid ah dalalka jaarka ah.
Sida ay sheegayaan warar ay heleyso Xeernews24.com Madaxweynaha ayaa uga qeyb galaya Nairobi shir gaar ah oo Madaxda Urur Goboleedka IGAD uga arrinsanayaan xaalada qaxootiga Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa horay u iclaamisay inay marti gelin doonto shir gaar ah oo Madaxda IGAD uga hadlayaan arrimaha qaxootiga, iyadoo Kenya ay u aragto in dhib weyn ku heyso qaxootiga faraha badan ee dalkeeda ku sugan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in la soo gaadhsiiyay casuumaada shirkan, waxaana ka sokow casuumaada shirkaas jiray martiqaad rasmi ah oo Madaxweynaha Kenya u fidiyay, markii uu u imaanayay caleema saarkiisa bishii la soo dhaafay.
Aadan Barre Ducaale oo ah Hoggaamiyaha Aqlabiyada badan ee Baarlamaanka Kenya ayaa xalay ka sheegay xaflad ka dhacday magaalada Nairobi oo lagu taageerayay dowladda cusub, in dhamaadka bishan uu Madaxweyne Farmaajo booqasho rasmi ah ku imaan doono dalka Kenya.
Waxaa uu sheegay inay si weyn u soo dhoweyn doonaan Madaxweynaha, isagoo tilmaamay ka hor imaanshihiisa ay dowladda kenya qaadi doonto tallaabo weyn oo xidhiidhka labada dal muujinaysa.
Kenya iyo Soomaaliya ayaa xilligan waxaa u dhaxeeya muran la xidhiidha badda, iyadoo Maxkamadda Caalamiga ay hor-taala dooda labada dal u dhaxeysa oo dhowaan Maxkamaddu go’aamisay inay qaado.
Dowladdii uu hoggaaminayay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh ayaa meel fiican gaadhsiisay dacwada taala Maxkamadda Hague, iyadoo dhowr jeer diiday in dacwada lagu xaliyo wada hadal, si looga maarmo Maxkamadda.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/Cabdilaahi.jpg 217 232 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-05 17:07:012017-03-05 17:07:01Madaxweyne Farmaajo oo booqashadii u Horeysay ku tagaya mid ka mid ah dalalka jaarka
Trump Awoowgii Wuxuu Qortay Codsi Uu Ku Baryayo In Aan La Mustaafurin Laakiin... Salal iyo Saylac waa Janno dad la,